Mexico oo sharciga isgaarsiinta badashay - BBC Somali - Ganacsi
Mexico oo sharciga isgaarsiinta badashay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Maarso, 2013, 19:22 GMT 22:22 SGA
Madaxweynaha Mexico Enrique Pena Nieto ayaa balanqaaday inuu isbadalo ku samaynayo dhaqaalaha.
Congresska Mexico ayaa ansixiyay isbadal wayn oo lagu samaynayo isgaarsiinta waddanka, taasoo saamayn doonto ninka adduunka ugu taajirsan Carlos Slim. Shirkadiisa America Movil, ayaa iskaleh boqolkiiba toddobaatan shan telefoonka mobilka iyo kan guryaha.
Sharcigan cusub ayaa u ogolaan doona shirkado badan inay suuqa ku tartamaan iyo kuwa ajnabiga.
Shirkadda Telefishinka ee Televista oo ugu wayn qaarada Koonfur Amerika ayay saamayn doontaa in shirkado kale ay la tartamaan.
Dowladda cusub ee Mexico ayaa balanqaaday inay isbadalo ku samayn doonto sharciyada dhaqaalaha oo ay xor ka dhigi ganacsiga suuqa Mexico. Wararka la xiriira